Vaovao - Mety hitombo ny fangatahana paraquat manerantany
Mety hitombo ny fangatahana paraquat manerantany
Rehefa nanangana paraquat teny an-tsena ny ICI tamin'ny taona 1962, dia tsy ho noeritreretin'ny olona mihitsy fa ny paraquat dia hiaina fiainana henjana sy henjana toy izany amin'ny ho avy. Ity herbicide tsy mifantina midadasika ity dia voatanisa ao amin'ny lisitry ny herbicide faharoa lehibe indrindra eran-tany. Nahamenatra indray mandeha ny fidinana, saingy miaraka amin'ny fitohizan'ny vidin'ny Shuangcao amin'ity taona ity ary azo inoana fa hiakatra hatrany, dia sahirana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izy io, fa ny paraquat mora vidy dia mitondra ny fiandohan'ny fanantenana.
Herbicide tsy mifantina tsy mifantina tsara
Paraquat dia herbicide bipyridine. Ny herbicide dia herbicide mifandray tsy mifantina novolavolain'ny ICI tamin'ny taona 1950. Manana spektrum herbicidal midadasika izy io, hetsika mifandray haingana, fanoherana ny fikaonan'ny orana, ary tsy fifantenana. Ary toetra tsara hafa.
Ny paraquat dia azo ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ny ahi-dratsy alohan'ny fambolena na aorian'ny fiposahan'ny tany amin'ny tanimboly, katsaka, fary, soja ary vokatra hafa. Izy io dia azo ampiasaina ho desiccant mandritra ny fijinjana ary koa ho toy ny defoliant.
Paraquat dia mamono ny fonon'ny chloroplast amin'ny tsimparifary indrindra amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny faritra maitso amin'ny tsimparifary, izay misy fiantraikany amin'ny fiforonan'ny chlorophyll ao amin'ny ahi-dratsy, ka misy fiantraikany amin'ny photosynthesis ny tsimparifary, ary farany mampiato haingana ny fitomboan'ny tsimparifary. Ny paraquat dia misy fiantraikany manimba mafy amin'ny tavy maitso amin'ny zavamaniry monocot sy dicot. Amin'ny ankapobeny, ny tsimparifary dia mety hiova loko ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 3 ora aorian'ny fampiharana.
Ny toe-javatra sy ny fanondranana paraquat
Noho ny poizina avy amin'ny paraquat amin'ny vatan'olombelona sy ny mety hanimba ny fahasalaman'ny olombelona amin'ny dingan'ny fampiharana tsy ara-dalàna, ny paraquat dia voarara amin'ny firenena 30 mahery ao anatin'izany ny Vondrona Eoropeana, Shina, Thailandy, Soisa ary Brezila.
Araka ny angon-drakitra navoakan'ny 360 Research Reports, ny varotra paraquat eran-tany tamin'ny taona 2020 dia nihena ho 100 tapitrisa dolara amerikana. Araka ny tatitry ny Syngenta momba ny paraquat navoaka tamin'ny 2021, Syngenta dia mivarotra paraquat amin'izao fotoana izao any amin'ny firenena 28. Misy orinasa 377 manerana izao tontolo izao izay nisoratra anarana amin'ny famolavolana paraquat mahomby. Syngenta dia iray amin'ireo fivarotana paraquat manerantany. Telovolana.
Tamin’ny taona 2018, nanondrana paraquat 64.000 taonina sy 56.000 taonina i Shina tamin’ny taona 2019. Ny tena toerana fanondranana ny paraquat any Sina amin’ny taona 2019 dia Brezila, Indonezia, Nizeria, Etazonia, Meksika, Tailandy, Aostralia, sns.
Na dia voarara aza ny paraquat any amin'ireo firenena mpamokatra fambolena manan-danja toa ny Vondrona Eoropeana, Brezila ary Shina, ary nihena ny habetsaky ny fanondranana tato anatin'ny taona vitsivitsy, ao anatin'ny toe-javatra manokana izay mitohy ny vidin'ny glyphosate sy glufosinate-ammonium. ho ambony amin'ity taona ity ary mety hiakatra hatrany, ny Paraquat, karazana saika very fanantenana, dia hitondra hery vaovao.
Ny vidin'ny Shuangcao avo lenta dia mampirisika ny fitakiana maneran-tany amin'ny paraquat
Teo aloha, raha 26.000 yuan/ton ny vidin'ny glyphosate, 13.000 yuan/ton ny paraquat. Ny vidin'ny glyphosate amin'izao fotoana izao dia mbola 80,000 yuan / taonina, ary ny vidin'ny glufosinate dia mihoatra ny 350,000 yuan. Taloha, teo amin'ny 260.000 taonina teo ho eo ny tampon'isan'ny fitakiana paraquat maneran-tany (mifototra amin'ny 42% amin'ny vokatra tena izy), izany hoe 80.000 taonina eo ho eo. Ny tsena sinoa dia 15.000 taonina eo ho eo, 10.000 taonina i Brezila, 10.000 taonina eo ho eo i Thailand, ary i Indonezia, Etazonia, ary Thailandy. Nizeria, India ary firenena hafa.
Miaraka amin'ny fandrarana ny fanafody nentim-paharazana toa an'i Shina, Brezila ary Thailand, ara-teorika, maherin'ny 30.000 taonina ny tsenan'ny tsena no nafahana. Na izany aza, tamin'ity taona ity, miaraka amin'ny fisondrotana haingana ny vidin'ny "Shuangcao" sy Diquat, ary ny tsena tsy misy olona any Etazonia Miaraka amin'ny fanalalahana ny fampiharana milina, ny fangatahana any amin'ny tsenan'i Etazonia na Amerika Avaratra dia nitombo 20% eo ho eo, izay nandrisika ny fangatahana paraquat ary nanohana ny vidiny amin'ny lafiny iray. Amin'izao fotoana izao, ny tahan'ny vidin'ny paraquat dia mifaninana kokoa raha latsaky ny 40.000. hery.
Fanampin'izany, ny mpamaky any Azia Atsimoatsinanana dia mitatitra amin'ny ankapobeny fa any amin'ny faritra toa an'i Vietnam, Malezia, ary Brezila, dia mitombo haingana ny ahi-dratsy mandritra ny vanin-taonan'ny orana, ary ny paraquat dia manana fanoherana tsara amin'ny fikorontanan'ny orana. Nisondrotra loatra ny vidin'ny herbicide biocidal hafa. Mbola misy ny fitakiana hentitra ny tantsaha amin’ireo faritra ireo. Nilaza ny mpanjifa any an-toerana fa mitombo ny fahafahana mahazo paraquat amin'ny fantsona volondavenona toy ny varotra sisintany.
Ankoatr'izay, ny akora manta amin'ny paraquat, pyridine, dia an'ny indostrian'ny simika arintany ambany. Ny vidiny amin'izao fotoana izao dia tsy miova amin'ny 28,000 yuan / taonina, izay tena fiakarana lehibe tokoa raha oharina amin'ny ambany teo aloha 21,000 yuan / taonina, saingy tamin'izany fotoana izany dia 21,000 yuan / taonina dia efa ambany noho ny vidin'ny 2,4 1000 yuan / taonina. . Noho izany, na dia nisondrotra aza ny vidin'ny pyridine, dia mbola amin'ny vidiny mirary, izay vao mainka hahazo tombony amin'ny fitomboan'ny fangatahana paraquat manerantany. Maro amin’ireo mpanamboatra paraquat ao an-toerana ihany koa no antenaina hisitraka izany.
Ny fahafahan'ny orinasa mpamokatra paraquat lehibe
Amin'ity taona ity, voafetra ny famoahana ny fahafaha-mamokatra paraquat (amin'ny 100%), ary i Shina no mpamokatra paraquat. Fantatra fa ny orinasa ao an-toerana toa ny Red Sun, Jiangsu Nuoen, Shandong Luba, Hebei Baofeng, Hebei Lingang, ary Syngenta Nantong dia mamokatra paraquat. Teo aloha, raha ny paraquat no tsara indrindra, Shandong Dacheng, Sanonda, Lvfeng, Yongnong, Qiaochang, ary Xianlong dia anisan'ireo mpanamboatra paraquat. Raha ny fantatra dia tsy mamokatra paraquat intsony ireto orinasa ireto.
Manana zavamaniry telo hamokarana paraquat ny Red Sun. Anisan'izany ny Nanjing Red Sun Biochemical Co., Ltd. manana fahafaha-mamokatra 8,000-10,000 taonina. Ao amin'ny Nanjing Chemical Industrial Park no misy azy. Tamin'ny taon-dasa, ny 42%-n'ny vokatra ara-batana dia manana vokatra isam-bolana 2.500-3.000 taonina. Tamin'ity taona ity dia nampitsahatra tanteraka ny famokarana. . Ny orinasa Anhui Guoxing dia manana fahafaha-mamokatra 20.000 taonina. Ny orinasa Shandong Kexin dia manana fahafaha-mamokatra 2.000 taonina. Navoaka tamin'ny 70% ny fahafahan'ny Red Sun famokarana.
Jiangsu Nuoen dia manana fahaiza-mamokatra 12.000 taonina paraquat, ary ny tena famokarana dia eo amin'ny 10.000 taonina, izay mamoaka ny 80% ny fahafahany; Shandong Luba dia manana fahafaha-mamokatra 10.000 taonina paraquat, ary ny tena famokarana dia eo amin'ny 7.000 taonina, izay mamoaka eo amin'ny 70% amin'ny fahafaha-mamokatra azy; Ny famokarana paraquat an'i Hebei Baofeng dia 5.000 taonina; Hebei Lingang dia manana fahafaha-mamokatra paraquat 5.000 taonina, ary ny tena famokarana dia tokony ho 3.500 taonina; Ny Syngenta Nantong dia manana fahafaha-mamokatra paraquat 10.000 taonina, ary eo amin'ny 5.000 taonina eo ho eo ny tena famokarana.
Ankoatr'izay, Syngenta dia manana trano famokarana 9.000 taonina ao amin'ny orinasa Huddersfield any Royaume-Uni ary trano 1.000 taonina any Brezila. Raha ny fantatra dia niharan’ny valan’aretina ihany koa tamin’ity taona ity tao anatin’ny toe-javatra nihena be ny vokatra, ka nampihena 50% ny vokatra indray mandeha.
Ny paraquat dia mbola manana tombony tsy azo soloina any amin'ny firenena maro manerana izao tontolo izao. Ankoatr'izay, ny vidin'ny glyphosate sy glufosinate amin'izao fotoana izao amin'ny maha mpifaninana dia avo lenta ary henjana ny famatsiana, izay manome eritreritra be momba ny fitomboan'ny fangatahana paraquat.
Ny lalao olaimpika ririnina any Beijing dia hatao amin'ny Febroary amin'ny taona ho avy. Nanomboka tamin'ny Janoary 2022, orinasa lehibe maro any avaratr'i Shina no miatrika ny risika hampiato ny famokarana mandritra ny 45 andro. Amin'izao fotoana izao dia tena azo inoana izany, saingy mbola misy ny tsy fahazoana antoka. Ny fampiatoana ny famokarana dia tsy maintsy mampitombo ny fihenjanana eo amin'ny famatsiana sy ny fangatahana ny glyphosate sy ny vokatra hafa. Ny famokarana sy ny varotra paraquat dia antenaina hanararaotra izao fotoana izao hahazoana fampiroboroboana.